【 ဆောငျးပါး 】 “ တဈယောကျတညျး….ခမျြးသာသူမြား ” | Opinion Leaders
“သားကွီးရယျ မငျးရဲ့ Handset ကအကောငျးခညျြးရှိသေးတဲ့ဟာ။ဘာလို့အသဈဝယျရမှာလဲ”
“ကြှနျတေျာ့ handset က ဖုနျးပွောလို့ပဲရတဲ့ဟာ။ကနျြတာဘာမှလုပျလို့ရတာမဟုတျဘူး”
“အမတေို့မှာအကုနျအကတြှမြေားနတေယျလေ။မငျးအခုသုံးနတေဲ့ဖုနျးကိုပဲကွညျ့။ Handset ခညျြးပဲက နှဈသိနျးခှဲပေးရ တယျ။ ငှဖွေညျ့ကတျအတှကျလညျး ငါးထောငျ၊ငါးထောငျနဲ့ တဈလကို တဈ သောငျးခှဲ၊ နှဈသောငျး ပေးရတယျ။ ဒီကွားထဲ မငျးမို့လို့ထပျတောငျးရကျတယျ”
“အမေ့ handset က သုံးစားလို့မရတော့ဘူးဗြ။ကဲ ကဲ-အပိုတှပွေောမနနေဲ့၊ မဝယျပေးခငျြ လညျး နေ။ကြှနျတျောလညျး အလုပျမသှား တော့ဘူး”
“ဟဲ့-့handset ဖိုးပိုကျဆံမပေးတာနဲ့ အလုပျမသှားတာဘာဆိုငျလို့လဲ”
“ကြှနျတျောဆယျတနျးတကျနတောမဟုတျဘူးဗြ။ တက်ကသိုလျတကျနတော။သူမြားhandset တှကေ အပြံစားတှေ။လူရှေ့ သူ ရှမှေ့ာ ကိုယျ့ဖုနျးအစုတျအပွတျကို ထုတျတောငျမကိုငျရဲဘူး”
“ကဲ-ကဲ ငါပဲအရှုံးပေးပါတယျ။ပွော-မငျး handset က ဘယျလောကျတဲ့လဲ”
“ဘာ-လေးသိနျးခှဲ ဟုတျလား။ကောငျးတယျ။ကောငျးတယျ။မိသားစု ငါးယောကျရှိတယျ။ကနျြတဲ့ လူတှေ ကတော့အငတျငတျ အပွတျပွတျ နဲ့ခွဈခွုတျစားသောကျနရေပွီး မငျးတဈယောကျထဲ ကှကျပွီး ခမျြးသာနေ-သိလား”
ကောငျလေးက ကုမ်ပဏီတဈခုမှာ စလုပျနခေါစ ။သူကအကွီးဆုံး။သူ့အောကျမှာ ညီတဈ ယောကျ။ ညီမတဈယောကျရှိ သညျ။ညီကကိုးတနျး၊ညီမလေးကခုနဈတနျး။အဖဖွေဈသူက ကုနျတငျကားမောငျး သညျ။အမဖွေဈသူက သူတို့အိမျရှေ့ တှငျမုနျ့ဟငျးခါးရောငျးသညျ။
ကြှနျတျောကသူတို့ဆိုငျမှာမကွာခဏ မုနျ့ဟငျးခါးစားဖွဈသညျ။မုနျ့စားရငျး သူတို့သားအမိတှေ စကားပွောတာ၊ရနျဖွဈတာ တှေ ကို မွငျနေ၊ကွားနကေဖြွဈသညျ။
ကောငျလေးက သူ့အမပွေောလညျးပွောစရာပါ။မိသားစုမကျြနှာကိုမကွညျ့။ သူဖွဈခငျြတာ၊ သူလို ခငျြတာ ပဲဇှတျတိုးပွောတတျ၊တောငျးဆိုတတျ၏။သားအမိတှေ မညျသို့ပငျတဈယောကျတဈခှနျးပွောကွသျော လညျး နောကျဆုံးမှာတော့ သူ့အလိုကိုလိုကျလြောရသညျသာ ခညျြးဖွဈသညျ။
တခြို့ကသညျလိုပါပဲ။မိဘဆီက အနုနညျးနှငျ့ဖွဈစေ၊အကွမျးနညျးနှငျ့ဖွဈစေ၊ သူတို့လိုခငျြ တာရှိလို့ ကတော့ မိဘမကျြနှာရဲရဲကွညျ့၍၊ရဲရဲတောငျးတတျကွပါသညျ။
သူတို့လေးတှဟော အရှယျရောကျလာပွီ။အတှအေ့ကွုံဗဟုသုတတှလေညျး မြားလာပွီ။ အတတျ ပညာအနနှေငျ့လညျး တက်ကသိုလျပညာရပျတှဆေညျးပူးကာလုပျငနျးသို့လညျးဝငျနပွေီ။
သို့သျော မိဘမြား၏ပိုကျဆံရှာရသညျ့ဒုက်ခ၊မလောကျငှ၍စိတျသောကရောကျရသညျ့ ဒုက်ခမြားကို မတှေး။ငါတဈကိုယျကောငျးဆနျနပေါလား၊ ငါပိုကျဆံရှာပွီး မိဘကိုဝအောငျမလုပျကြှေးနိုငျခငျ ငါ့အတှကျ ကုနျကစြရိတျ သကျသာအောငျခွိုးခွံသငျ့ ပါလားဟူသညျ့အတှေးမြိုးဝငျမလာဘဲ ၊မိမိလိုခငျြတာ ရခငျြရ ၊မရလြှငျ ကနျြလူတှကေိုပွဿနာရှာမညျဟုသာတှေးနတေတျကွ၏။
ဆိုသညျက တဈလောကလုံးမှာရှိသညျ့ဘယျသူတှသေသေေ ပွဿနာမရှိပါ။အရေးကွီးတာက ‘ငတေ’ ကနျြးကနျြးမာမာရှိနဖေို့ပါ။
လူတဈယောကျသညျ ခမျြးသာခငျြစိတျလှနျကဲလာလြှငျ တဈကိုယျကောငျးဆနျ လာတတျ၏။ ပုံမှနျ အရညျအခငျြးနှငျ့ခမျြးသာဖို့မလှယျသညျ့အခါမြား၊ခမျြးသာနိုငျသျောလညျး အခြိနျကာလတဈခုကို စောငျ့ရဦး မညျ့အခါမြိုးတှငျ စိတျရှညျရှညျမထားနိုငျတော့။အဆငျ့ဆငျ့သှားရမညျ့သဘာဝကို လကျမခံ ခငျြတော့။
သညျတှငျ တရားသဖွငျ့လုပျရမညျ့ကိစ်စမှာ မတရားမှုတှပေါလာသညျ။
မိမိခမျြးသာဖို့အတှကျ အခွားသူမြားထံမှ ငှကွေေးပစ်စညျးဥစ်စာကို လိမျယူကွသညျ။ခိုးယူ ကွသညျ။ လုယကျယူကွသညျ။
အရကျ၊ဆေးခွောကျ၊ဘိနျး အစရှိသော မူးယဈဆေးဝါးမြားကိုထုတျလုပျ၍ လူတှကေိုဖွားယောငျး သှေးဆောငျလာသညျ။ ထိုလူတှေ စာရိတ်တပကျြမှာ၊စိတျဓါတျပြော့ညံ့သှားမှာ၊ကနျြးမာရေး ထိခိုကျမှာ၊စီးပှား ပကျြမှာ၊ လူကိုယျတိုငျပကျြစီးသှားမှာသူတို့အရေးမလုပျ။သူတို့သိတာ တဈခုပဲရှိသညျ။သူတို့ခမျြးသာဖို့။
စားသောကျကုနျတှမှော ဆိုးဆေးတှသေုံးလာသညျ။ဟငျးခတျမှုနျ့ကဲ့သို့ စားသောကျကုနျမြိုးဆိုလြှငျ အတုတှဖေနျတီးကွသညျ။ကနျြးမာရေးအတှကျ ဆရာဝနျမြား၊ဆေးပညာရှငျမြားက အခြိနျကုနျ၊ငှကေုနျ၊လူ အပငျပနျးခံပွီး စတေနာနှငျ့ပညာပေါငျးစပျထုတျလုပျထားသညျ့ဆေးဝါးမြိုးကိုလညျး အတုအပဖနျတီးထုတျ လုပျပွီး ပုံမှားရိုကျရောငျးခကြွသညျ။ကနျြလူမြား၏အသကျအန်တရာယျကိုလဈြလြူရှု၍ သူတို့တဈဦးတဈ ယောကျခမျြးသာဖို့ကိုသာ အာရုံထားကွလသေညျ။
လောကမှာ တဈကိုယျကောငျးဆနျသညျ့ ‘ငတေ’ မြား ဆိုးသှမျးနပေါသညျ။ဘယျသူဘာဖွဈဖွဈ ‘ငတေ’ မာဖို့သာအဓိကဟု ခံယူထားကွလပွေီ။
အခြို့ခံယူခကျြပွငျးသော ‘ငတေ’ မြားကတော့ သကျမဲ့ပစ်စညျးအရောငျးအဝယျကို စိတျမဝငျစားကွပဲ သကျရှိလူသားမြားကို အရောငျးအဝယျလုပျလာသညျ။ကလေးငယျမြားကို ခိုး၊အရှယျရောကျပွီး အမြိုး သား၊အမြိုးသမီးကောငျးလေးမြားကို အနုနညျး၊အကွမျးနညျး ပရိယာယျအမြိုးမြိုးနှငျ့ဆှဲဆောငျသိမျးသှငျးပွီး နိုငျငံခွားသို့ရောငျးခသြညျအထိ အသိစိတျတှေ ပြောကျလာကွသညျ။
ဒီလိုပဲနရောတိုငျးတှငျ ‘ငတေ’မြားရှိသညျ။မိမိရောကျရှိနသေောနရောသညျ မွငျ့မွတျသောနရော (Noble position) ဟု ဂုဏျယူ မစဉျးစားဘဲ မွငျ့မားသောနရော (High position) ဟု မာနနှငျ့ စဉျးစားကွ သညျ။
ဒီလိုလူတှကေThe poorer the public are, the richer they are. (လူထုဆငျးရဲလလေေ၊ သူတို့ခမျြး သာ လလေေ) စနဈကိုကငျြ့သုံးသညျ့ ‘မဟာငတကွေီး’ မြိုးဖွဈ၏။
တကယျတော့ တဈယောကျတညျးခမျြးသာနသေူတှမှောရှိတာက အာဏာနှငျ့ငှပေါ။သူတို့မှာမရှိ တာ က ကိုယျကငျြ့တရားနှငျ့ လူထုကွညျညိုမှုပါ။သူတို့ခန်ဓာကိုယျကွီးက အမွငျဆုံးမှာပဲနနေေ၊တာဝတိံသာကိုပဲ အလညျသှားသှား၊သူတို့စိတျဓာတျ၊သူတို့ကိုယျကငျြ့တရား၊သူတို့ဂုဏျသိက်ခာက အိမျအောကျမှာ၊ အနိမျ့ဆုံးမှာ ၊ အဝီစိမှာပါ။
ဒီလိုလူတှနှေငျ့ပွောငျးပွနျ ကိုယျတိုငျအဆငျးရဲခံပွီး လူထုတဈရပျလုံးခမျြးသာအောငျ ဆောငျရှကျ တတျသော သူရဲကောငျးပုဂ်ဂိုလျထူးမြားလညျး ရှိပါသညျ။
နှဈဆယျရာစုမွနျမာနိုငျငံမှာပွညျသူအတှကျအသကျပေးရဲသော၊တကယျလညျးပေးခဲ့သောOne for All ခေါငျးဆောငျမြိုး အမှနျတကယျရှိခဲ့ပါသညျ။ပညာရေး၊လူမှုရေး၊နိုငျငံရေး၊စဈရေး၊စာပဗေဟုသုတ နှံ့စပျ ကြှမျး ကငျြသညျ့ အပွငျ မြိုးခဈြစိတျ၊နိုငျငံခဈြစိတျအပွညျ့အဝရှိပါသညျ။အမြားခမျြးသာရေးအတှကျ ဘာမ ဆိုပေးရဲသော သူရဲကောငျး အာဇာနညျစိတျလညျးအခိုငျအမာရှိပါသညျ။
ထို့ကွောငျ့လညျး သူလုပျခဲ့သလောကျ မွနျမာနိုငျငံ၊မွနျမာလူမြိုးတို့ ကောငျးကြိုးခမျြးသာရခဲ့ပါသညျ။ ကမ်ဘာ့အလညျမှာ မွနျမာ ဟုသိစေ၊မွငျစေ၊ထငျရှားစခေဲ့ပါသညျ။သူသသှေားသညျ့တိုငျ၊သူ့အရှိနျအဝါ၊သူ့သွဇာ၊ သူ့စတေနာက ပွညျတှငျးရောပွညျပပါ ပြံ့နှံ့နပေါသေးသညျ။
လူထု၏ဘဝတှေ၊အသကျတှကေိုရငျးပွီး၊နငျးပွီး၊လူထုကိုဆငျးရဲတှငျးနကျစပွေီး မိမိတဈယောကျ တညျး ခမျြးသာခငျြ သူ၊မိမိတဈယောကျအတှကျလူထု၏ဘဝတှပေေးဆပျစခေဲ့သူ၊ရနျသူနဲ့တှတေ့ော့ပနျးလို အလှပေး၊ရနံ့ပေး၊မကျြနှာခြိုသှေးကာလူထုနှငျ့တှတေ့ော့ သောကတှေ၊လောဘတှေ၊ဒေါသ တှနှေငျ့မီးလို ပူပွငျးနသေောသူ All for One ခေါငျးဆောငျမြိုးနှငျ့လူထု၏ဘဝတှေ၊အသကျတှကေို ရငျဘတျထဲထညျ့၊ပခုံး ပျေါ ထမျး၊ခေါငျးပျေါရှကျလကျြ မိမိ၏အသကျ၊ဘဝနှငျ့အတ်တကို စှနျ့လှတျနိုငျသူ၊လူထုနှငျ့တှတေ့ော့ ပနျလို လနျး ဆနျးမှေးပြံ့စခေဲ့ပွီး၊ရနျသူနှငျ့တှတေ့ော့ မြိုးခဈြစိတျ၊နိုငျငံခဈြစိတျ၊သူ့ကြှနျမခံစိတျမြားနှငျ့ မီးလိုပူပွငျး စသေောသူ One for All ခေါငျးဆောငျမြိုးကို ယှဉျကွညျ့လြှငျ ကှာခွားခကျြအနှဈသာရကိုတှနေို့ငျပါသညျ။
ဘယျလိုပွောပွော၊ဘယျလိုထောကျပွပွ ‘ငတေ’ တို့ကတော့ ရှကျရကောငျးမှနျးမသိ အောငျ မကျြနှာ ပွောငျပွောငျနှငျ့ နှုတျမဆှံ့၊လကျမရှံ့၊ခွမေတှနျ့၊သတိမကှနျ့ဘဲ ပွောမွဲပွော၊လုပျမွဲလုပျ။ လြှောကျမွဲလြှောကျ၊ ကွံစညျမွဲကွံစညျ နိုငျကွလသေညျ။
မှားမှနျးသိပါလကျြနှငျ့ မိမိရရှိမညျ့ စညျးစိမျ၊ရရှိခဲ့ပွီးသညျ့စညျးစိမျတို့ကို မကျမကျမောမော စှဲလမျး နသေူမြားကား ဓားသှားထကျမှပြားရညျစကျကို မစှနျ့နိုငျ၊မခှာရကျ မွတျမွတျနိုးနိုးလြှကျနကွေသူမြားနှငျ့ တူလှပေ၏။
ပူမှနျးသိလကျြနှငျ့မီးရှိရာသို့ ဇှတျတိုးနသေော ပိုးဖလံမြားနှငျ့ တူလှပေ၏။ဇာတျခုံပျေါမှာ ကခုနျ နရေငျး ပုဆိုးကြှတျ နပေါလကျြနှငျ့ ပုဆိုးကိုကောကျမဝတျဘဲ ဆကျ၍ကခုနျနသေော မငျးသားနှငျ့ တူ လှပေ၏။
'ငတမောပွီးရော’ လူစားမြားသညျ ကြှတျနသေောပုဆိုးကိုကောကျယူ၍ အရှကျလုံအောငျမဝတျဘဲ မရှကျမကွောကျ ဆကျလြှောကျနကွေလသေညျ။
တကယျတော့ တဈယောကျတညျးခမျြးသာလိုသူမြားသညျ မိသားစုနှငျ့အတူရှိမနသေငျ့ပါ။ ရပျကှကျ၊ မွို့၊ရှာ၊နိုငျငံအတှငျးမှလညျး ရှိမနသေငျ့ပါ။သူ၏တဈကိုယျကောငျးဆနျမှုက မိသားစုကိုသာမက၊ ရပျကှကျ၊ မွို့၊ရှာ၊နိုငျငံနှငျ့ကမ်ဘာကိုပငျ ပကျြစီးသှားစနေိုငျပါသညျ။
သာမနျမိသားစုဝငျ၊သာမနျနိုငျငံသားမြားသညျပငျ တဈယောကျတညျးခမျြးသာလိုစိတျ ထား၍မရပါ။ လူထုကိုခေါငျးဆောငျရမညျ့သူမြားအနနှေငျ့ဆိုလြှငျ ပို၍ပငျ အတ်တစိတျကိုဖြောကျသငျ့ပါသေးသညျ။
အထူးသဖွငျ့ မွနျမာလူထုအနနှေငျ့ မိမိတဈကိုယျတညျးခမျြးသာမှုကိုမကွညျ့၊လူထုအကြိုးကိုကွညျ့၍ ယနေ့ မွနျမာနိုငျငံကို သူ့ကြှနျဘဝမှ လှတျအောငျကိုယျကြိုးစှနျ့ခဲ့သော ‘ဗိုလျခြုပျ’ နှငျ့ ပွညျသူ့အကြိုးကို မကွညျ့၊ တဈကိုယျတညျး ခမျြးသာမှုကိုကွညျ့၍ သူတှကေို ယှဉျကွညျ့ပါ။
ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးက မွနျမာ့မွမှောရော၊ကမ်ဘာ့မွမှောပါ မရှိတော့ပါ။သို့သျောလညျး သူတို့၏နာမညျ ဂုဏျ သတငျး ကတော့ အခိုငျအမာရှိနဆေဲပါ။ သူတို့လုပျခဲ့သညျ့ အကြိုးကို လူထုအားလုံး စံနရေဆဲ။
နိုငျငံတကာကိုကွညျ့မညျဆိုလြှငျ လူထုခမျြးသာရေးကိုကွညျ့ခဲ့သောခေါငျးဆောငျမြား၏ သားသမီး မြားက မိမိတို့အရညျအခငျြးရှိသလောကျ သမိုငျးဟောငျးကိုလညျးရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖျေါထုတျနိုငျပါသညျ။ သမိုငျးသဈကို လညျး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရေးထိုးဖနျတီးနိုငျပါသညျ။
တဈယောကျတညျးခမျြးသာရေးကိုကွညျ့ခဲ့သော တခြို့သော သူမြား၏သားသမီးမြားကတော့ မိမိတို့ မှာ အရညျအခငျြးရှိနလြှေငျတောငျမှ သမိုငျးဟောငျးကိုလညျးမဖျေါထုတျရဲပါ။သမိုငျးသဈကိုလညျး မဖနျတီး ရဲကွပါ။
သညျတော့-- ကြှနျတျောတို့အားလုံး စဉျးစားဆုံးဖွတျရမှာက---
“သားကြီးရယ် မင်းရဲ့ Handset ကအကောင်းချည်းရှိသေးတဲ့ဟာ။ဘာလို့အသစ်ဝယ်ရမှာလဲ”
“ကျွန်တော့် handset က ဖုန်းပြောလို့ပဲရတဲ့ဟာ။ကျန်တာဘာမှလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး”
“အမေတို့မှာအကုန်အကျတွေများနေတယ်လေ။မင်းအခုသုံးနေတဲ့ဖုန်းကိုပဲကြည့်။ Handset ချည်းပဲက နှစ်သိန်းခွဲပေးရ တယ်။ ငွေဖြည့်ကတ်အတွက်လည်း ငါးထောင်၊ငါးထောင်နဲ့ တစ်လကို တစ် သောင်းခွဲ၊ နှစ်သောင်း ပေးရတယ်။ ဒီကြားထဲ မင်းမို့လို့ထပ်တောင်းရက်တယ်”
“အမေ့ handset က သုံးစားလို့မရတော့ဘူးဗျ။ကဲ ကဲ-အပိုတွေပြောမနေနဲ့၊ မဝယ်ပေးချင် လည်း နေ။ကျွန်တော်လည်း အလုပ်မသွား တော့ဘူး”
“ဟဲ့-့handset ဖိုးပိုက်ဆံမပေးတာနဲ့ အလုပ်မသွားတာဘာဆိုင်လို့လဲ”
“ကျွန်တော်ဆယ်တန်းတက်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ တက္ကသိုလ်တက်နေတာ။သူများhandset တွေက အပျံစားတွေ။လူရှေ့ သူ ရှေ့မှာ ကိုယ့်ဖုန်းအစုတ်အပြတ်ကို ထုတ်တောင်မကိုင်ရဲဘူး”
“ကဲ-ကဲ ငါပဲအရှုံးပေးပါတယ်။ပြော-မင်း handset က ဘယ်လောက်တဲ့လဲ”
“ဘာ-လေးသိန်းခွဲ ဟုတ်လား။ကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်။မိသားစု ငါးယောက်ရှိတယ်။ကျန်တဲ့ လူတွေ ကတော့အငတ်ငတ် အပြတ်ပြတ် နဲ့ခြစ်ခြုတ်စားသောက်နေရပြီး မင်းတစ်ယောက်ထဲ ကွက်ပြီး ချမ်းသာနေ-သိလား”
ကောင်လေးက ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ စလုပ်နေခါစ ။သူကအကြီးဆုံး။သူ့အောက်မှာ ညီတစ် ယောက်။ ညီမတစ်ယောက်ရှိ သည်။ညီကကိုးတန်း၊ညီမလေးကခုနစ်တန်း။အဖေဖြစ်သူက ကုန်တင်ကားမောင်း သည်။အမေဖြစ်သူက သူတို့အိမ်ရှေ့ တွင်မုန့်ဟင်းခါးရောင်းသည်။
ကျွန်တော်ကသူတို့ဆိုင်မှာမကြာခဏ မုန့်ဟင်းခါးစားဖြစ်သည်။မုန့်စားရင်း သူတို့သားအမိတွေ စကားပြောတာ၊ရန်ဖြစ်တာ တွေ ကို မြင်နေ၊ကြားနေကျဖြစ်သည်။
ကောင်လေးက သူ့အမေပြောလည်းပြောစရာပါ။မိသားစုမျက်နှာကိုမကြည့်။ သူဖြစ်ချင်တာ၊ သူလို ချင်တာ ပဲဇွတ်တိုးပြောတတ်၊တောင်းဆိုတတ်၏။သားအမိတွေ မည်သို့ပင်တစ်ယောက်တစ်ခွန်းပြောကြသော် လည်း နောက်ဆုံးမှာတော့ သူ့အလိုကိုလိုက်လျောရသည်သာ ချည်းဖြစ်သည်။
တချို့ကသည်လိုပါပဲ။မိဘဆီက အနုနည်းနှင့်ဖြစ်စေ၊အကြမ်းနည်းနှင့်ဖြစ်စေ၊ သူတို့လိုချင် တာရှိလို့ ကတော့ မိဘမျက်နှာရဲရဲကြည့်၍၊ရဲရဲတောင်းတတ်ကြပါသည်။
သူတို့လေးတွေဟာ အရွယ်ရောက်လာပြီ။အတွေ့အကြုံဗဟုသုတတွေလည်း များလာပြီ။ အတတ် ပညာအနေနှင့်လည်း တက္ကသိုလ်ပညာရပ်တွေဆည်းပူးကာလုပ်ငန်းသို့လည်းဝင်နေပြီ။
သို့သော် မိဘများ၏ပိုက်ဆံရှာရသည့်ဒုက္ခ၊မလောက်ငှ၍စိတ်သောကရောက်ရသည့် ဒုက္ခများကို မတွေး။ငါတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်နေပါလား၊ ငါပိုက်ဆံရှာပြီး မိဘကိုဝအောင်မလုပ်ကျွေးနိုင်ခင် ငါ့အတွက် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာအောင်ခြိုးခြံသင့် ပါလားဟူသည့်အတွေးမျိုးဝင်မလာဘဲ ၊မိမိလိုချင်တာ ရချင်ရ ၊မရလျှင် ကျန်လူတွေကိုပြဿနာရှာမည်ဟုသာတွေးနေတတ်ကြ၏။
ဆိုသည်က တစ်လောကလုံးမှာရှိသည့်ဘယ်သူတွေသေသေ ပြဿနာမရှိပါ။အရေးကြီးတာက ‘ငတေ’ ကျန်းကျန်းမာမာရှိနေဖို့ပါ။
လူတစ်ယောက်သည် ချမ်းသာချင်စိတ်လွန်ကဲလာလျှင် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန် လာတတ်၏။ ပုံမှန် အရည်အချင်းနှင့်ချမ်းသာဖို့မလွယ်သည့်အခါများ၊ချမ်းသာနိုင်သော်လည်း အချိန်ကာလတစ်ခုကို စောင့်ရဦး မည့်အခါမျိုးတွင် စိတ်ရှည်ရှည်မထားနိုင်တော့။အဆင့်ဆင့်သွားရမည့်သဘာဝကို လက်မခံ ချင်တော့။
သည်တွင် တရားသဖြင့်လုပ်ရမည့်ကိစ္စမှာ မတရားမှုတွေပါလာသည်။
မိမိချမ်းသာဖို့အတွက် အခြားသူများထံမှ ငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာကို လိမ်ယူကြသည်။ခိုးယူ ကြသည်။ လုယက်ယူကြသည်။
အရက်၊ဆေးခြောက်၊ဘိန်း အစရှိသော မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုထုတ်လုပ်၍ လူတွေကိုဖြားယောင်း သွေးဆောင်လာသည်။ ထိုလူတွေ စာရိတ္တပျက်မှာ၊စိတ်ဓါတ်ပျော့ညံ့သွားမှာ၊ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှာ၊စီးပွား ပျက်မှာ၊ လူကိုယ်တိုင်ပျက်စီးသွားမှာသူတို့အရေးမလုပ်။သူတို့သိတာ တစ်ခုပဲရှိသည်။သူတို့ချမ်းသာဖို့။
စားသောက်ကုန်တွေမှာ ဆိုးဆေးတွေသုံးလာသည်။ဟင်းခတ်မှုန့်ကဲ့သို့ စားသောက်ကုန်မျိုးဆိုလျှင် အတုတွေဖန်တီးကြသည်။ကျန်းမာရေးအတွက် ဆရာဝန်များ၊ဆေးပညာရှင်များက အချိန်ကုန်၊ငွေကုန်၊လူ အပင်ပန်းခံပြီး စေတနာနှင့်ပညာပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသည့်ဆေးဝါးမျိုးကိုလည်း အတုအပဖန်တီးထုတ် လုပ်ပြီး ပုံမှားရိုက်ရောင်းချကြသည်။ကျန်လူများ၏အသက်အန္တရာယ်ကိုလျစ်လျူရှု၍ သူတို့တစ်ဦးတစ် ယောက်ချမ်းသာဖို့ကိုသာ အာရုံထားကြလေသည်။
လောကမှာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သည့် ‘ငတေ’ များ ဆိုးသွမ်းနေပါသည်။ဘယ်သူဘာဖြစ်ဖြစ် ‘ငတေ’ မာဖို့သာအဓိကဟု ခံယူထားကြလေပြီ။
အချို့ခံယူချက်ပြင်းသော ‘ငတေ’ များကတော့ သက်မဲ့ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်ကို စိတ်မဝင်စားကြပဲ သက်ရှိလူသားများကို အရောင်းအဝယ်လုပ်လာသည်။ကလေးငယ်များကို ခိုး၊အရွယ်ရောက်ပြီး အမျိုး သား၊အမျိုးသမီးကောင်းလေးများကို အနုနည်း၊အကြမ်းနည်း ပရိယာယ်အမျိုးမျိုးနှင့်ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းပြီး နိုင်ငံခြားသို့ရောင်းချသည်အထိ အသိစိတ်တွေ ပျောက်လာကြသည်။
ဒီလိုပဲနေရာတိုင်းတွင် ‘ငတေ’များရှိသည်။မိမိရောက်ရှိနေသောနေရာသည် မြင့်မြတ်သောနေရာ (Noble position) ဟု ဂုဏ်ယူ မစဉ်းစားဘဲ မြင့်မားသောနေရာ (High position) ဟု မာနနှင့် စဉ်းစားကြ သည်။
ဒီလိုလူတွေကThe poorer the public are, the richer they are. (လူထုဆင်းရဲလေလေ၊ သူတို့ချမ်း သာ လေလေ) စနစ်ကိုကျင့်သုံးသည့် ‘မဟာငတေကြီး’ မျိုးဖြစ်၏။
တကယ်တော့ တစ်ယောက်တည်းချမ်းသာနေသူတွေမှာရှိတာက အာဏာနှင့်ငွေပါ။သူတို့မှာမရှိ တာ က ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် လူထုကြည်ညိုမှုပါ။သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက အမြင်ဆုံးမှာပဲနေနေ၊တာဝတိံသာကိုပဲ အလည်သွားသွား၊သူတို့စိတ်ဓာတ်၊သူတို့ကိုယ်ကျင့်တရား၊သူတို့ဂုဏ်သိက္ခာက အိမ်အောက်မှာ၊ အနိမ့်ဆုံးမှာ ၊ အဝီစိမှာပါ။
ဒီလိုလူတွေနှင့်ပြောင်းပြန် ကိုယ်တိုင်အဆင်းရဲခံပြီး လူထုတစ်ရပ်လုံးချမ်းသာအောင် ဆောင်ရွက် တတ်သော သူရဲကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ထူးများလည်း ရှိပါသည်။
နှစ်ဆယ်ရာစုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူအတွက်အသက်ပေးရဲသော၊တကယ်လည်းပေးခဲ့သောOne for All ခေါင်းဆောင်မျိုး အမှန်တကယ်ရှိခဲ့ပါသည်။ပညာရေး၊လူမှုရေး၊နိုင်ငံရေး၊စစ်ရေး၊စာပေဗဟုသုတ နှံ့စပ် ကျွမ်း ကျင်သည့် အပြင် မျိုးချစ်စိတ်၊နိုင်ငံချစ်စိတ်အပြည့်အဝရှိပါသည်။အများချမ်းသာရေးအတွက် ဘာမ ဆိုပေးရဲသော သူရဲကောင်း အာဇာနည်စိတ်လည်းအခိုင်အမာရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း သူလုပ်ခဲ့သလောက် မြန်မာနိုင်ငံ၊မြန်မာလူမျိုးတို့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာရခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့အလည်မှာ မြန်မာ ဟုသိစေ၊မြင်စေ၊ထင်ရှားစေခဲ့ပါသည်။သူသေသွားသည့်တိုင်၊သူ့အရှိန်အဝါ၊သူ့သြဇာ၊ သူ့စေတနာက ပြည်တွင်းရောပြည်ပပါ ပျံ့နှံ့နေပါသေးသည်။
လူထု၏ဘဝတွေ၊အသက်တွေကိုရင်းပြီး၊နင်းပြီး၊လူထုကိုဆင်းရဲတွင်းနက်စေပြီး မိမိတစ်ယောက် တည်း ချမ်းသာချင် သူ၊မိမိတစ်ယောက်အတွက်လူထု၏ဘဝတွေပေးဆပ်စေခဲ့သူ၊ရန်သူနဲ့တွေ့တော့ပန်းလို အလှပေး၊ရနံ့ပေး၊မျက်နှာချိုသွေးကာလူထုနှင့်တွေ့တော့ သောကတွေ၊လောဘတွေ၊ဒေါသ တွေနှင့်မီးလို ပူပြင်းနေသောသူ All for One ခေါင်းဆောင်မျိုးနှင့်လူထု၏ဘဝတွေ၊အသက်တွေကို ရင်ဘတ်ထဲထည့်၊ပခုံး ပေါ် ထမ်း၊ခေါင်းပေါ်ရွက်လျက် မိမိ၏အသက်၊ဘဝနှင့်အတ္တကို စွန့်လွှတ်နိုင်သူ၊လူထုနှင့်တွေ့တော့ ပန်လို လန်း ဆန်းမွှေးပျံ့စေခဲ့ပြီး၊ရန်သူနှင့်တွေ့တော့ မျိုးချစ်စိတ်၊နိုင်ငံချစ်စိတ်၊သူ့ကျွန်မခံစိတ်များနှင့် မီးလိုပူပြင်း စေသောသူ One for All ခေါင်းဆောင်မျိုးကို ယှဉ်ကြည့်လျှင် ကွာခြားချက်အနှစ်သာရကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဘယ်လိုပြောပြော၊ဘယ်လိုထောက်ပြပြ ‘ငတေ’ တို့ကတော့ ရှက်ရကောင်းမှန်းမသိ အောင် မျက်နှာ ပြောင်ပြောင်နှင့် နှုတ်မဆွံ့၊လက်မရွံ့၊ခြေမတွန့်၊သတိမကွန့်ဘဲ ပြောမြဲပြော၊လုပ်မြဲလုပ်။ လျှောက်မြဲလျှောက်၊ ကြံစည်မြဲကြံစည် နိုင်ကြလေသည်။
မှားမှန်းသိပါလျက်နှင့် မိမိရရှိမည့် စည်းစိမ်၊ရရှိခဲ့ပြီးသည့်စည်းစိမ်တို့ကို မက်မက်မောမော စွဲလမ်း နေသူများကား ဓားသွားထက်မှပျားရည်စက်ကို မစွန့်နိုင်၊မခွာရက် မြတ်မြတ်နိုးနိုးလျှက်နေကြသူများနှင့် တူလှပေ၏။
ပူမှန်းသိလျက်နှင့်မီးရှိရာသို့ ဇွတ်တိုးနေသော ပိုးဖလံများနှင့် တူလှပေ၏။ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ကခုန် နေရင်း ပုဆိုးကျွတ် နေပါလျက်နှင့် ပုဆိုးကိုကောက်မဝတ်ဘဲ ဆက်၍ကခုန်နေသော မင်းသားနှင့် တူ လှပေ၏။
'ငတေမာပြီးရော’ လူစားများသည် ကျွတ်နေသောပုဆိုးကိုကောက်ယူ၍ အရှက်လုံအောင်မဝတ်ဘဲ မရှက်မကြောက် ဆက်လျှောက်နေကြလေသည်။
တကယ်တော့ တစ်ယောက်တည်းချမ်းသာလိုသူများသည် မိသားစုနှင့်အတူရှိမနေသင့်ပါ။ ရပ်ကွက်၊ မြို့၊ရွာ၊နိုင်ငံအတွင်းမှလည်း ရှိမနေသင့်ပါ။သူ၏တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုက မိသားစုကိုသာမက၊ ရပ်ကွက်၊ မြို့၊ရွာ၊နိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာကိုပင် ပျက်စီးသွားစေနိုင်ပါသည်။
သာမန်မိသားစုဝင်၊သာမန်နိုင်ငံသားများသည်ပင် တစ်ယောက်တည်းချမ်းသာလိုစိတ် ထား၍မရပါ။ လူထုကိုခေါင်းဆောင်ရမည့်သူများအနေနှင့်ဆိုလျှင် ပို၍ပင် အတ္တစိတ်ကိုဖျောက်သင့်ပါသေးသည်။
အထူးသဖြင့် မြန်မာလူထုအနေနှင့် မိမိတစ်ကိုယ်တည်းချမ်းသာမှုကိုမကြည့်၊လူထုအကျိုးကိုကြည့်၍ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံကို သူ့ကျွန်ဘဝမှ လွတ်အောင်ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခဲ့သော ‘ဗိုလ်ချုပ်’ နှင့် ပြည်သူ့အကျိုးကို မကြည့်၊ တစ်ကိုယ်တည်း ချမ်းသာမှုကိုကြည့်၍ သူတွေကို ယှဉ်ကြည့်ပါ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက မြန်မာ့မြေမှာရော၊ကမ္ဘာ့မြေမှာပါ မရှိတော့ပါ။သို့သော်လည်း သူတို့၏နာမည် ဂုဏ် သတင်း ကတော့ အခိုင်အမာရှိနေဆဲပါ။ သူတို့လုပ်ခဲ့သည့် အကျိုးကို လူထုအားလုံး စံနေရဆဲ။
နိုင်ငံတကာကိုကြည့်မည်ဆိုလျှင် လူထုချမ်းသာရေးကိုကြည့်ခဲ့သောခေါင်းဆောင်များ၏ သားသမီး များက မိမိတို့အရည်အချင်းရှိသလောက် သမိုင်းဟောင်းကိုလည်းရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖေါ်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ သမိုင်းသစ်ကို လည်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရေးထိုးဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
တစ်ယောက်တည်းချမ်းသာရေးကိုကြည့်ခဲ့သော တချို့သော သူများ၏သားသမီးများကတော့ မိမိတို့ မှာ အရည်အချင်းရှိနေလျှင်တောင်မှ သမိုင်းဟောင်းကိုလည်းမဖေါ်ထုတ်ရဲပါ။သမိုင်းသစ်ကိုလည်း မဖန်တီး ရဲကြပါ။
သည်တော့-- ကျွန်တော်တို့အားလုံး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမှာက---